Fitantanana ny Coral Predators | Reef Resilience
Ireo biby mpihaza haran-dranomasina dia ampahany voajanaharin'ny tontolo voajanahary haran-dranomasina mahasalama. Na izany aza, dia manjavozavo tafahoatra ny kolokalista sasany, toy ny kisendrasendra (Acanthaster planci) ary kisoa mihinana sakafo (indrindra Drupella spp. ary Coralliophila abbreviata) dia mety hiteraka fihenam-bava manjavozavo sy miely patrana any amin'ny fonon'ny vatohara. Ny fidiran'ny vatohara dia mety hisy fiantraikany goavana amin'ny indostrian'ny haran-dranomasina - indrindra indrindra ny fizahan-tany - ary ireo mpikarakara vatohara ho an'ny haran-dranomasina dia mety maniry ny handinika ny safidy amin'ny fitantanana ireo mpihaza haran-dranomasina.
Ny fivoahana ireo kintana mareva-doko dia mety hanimba ny faharetan'ny haran-dranomasina. Ny fanesorana mivantana ireo mpihaza dia mety ho fidiram-bola ilaina. Sary © S. Kilarski
Ny teknika isan-karazany dia azo atao mba hanesorana na hisorohana ny fihanaky ny corallivores, saingy amin'ny ankapobeny dia tsy azo atao afa-tsy ny fomba fanaraha-maso eo an-toerana. Noho izany antony izany, ny fanaraha-maso ny biby mpihaza haran-koditra dia amin'ny ankapobeny ihany no manandrana mizana kely kokoa (hektara vitsy na kely), toy ny toeram-pizahantany avo lenta. Ny fandaharan'asan'ny fanaraha-maso sasany dia nifantoka tamin'ny tranokala izay heverina ho loharano fototry ny fanamboarana ireo biby mpihaza, izay mikendry ny hampihenana ny fiantraikan'ny rafitra. Ity pejy ity dia manolotra teknika sy olana mifandraika amin'ny fifehezana ny kintana matevina Drupella sifotra. Raha toa ka manimba ny vatohara indraindray ny valizy dia matetika izy ireo koa no manan-danja amin'ny fanaraha-maso ny alika sy ny fitehirizana ny tontolo voajanahary amin'ny haran-dranomasina mahasalama; Noho izany, ny fitantanana ny ranomasina dia rakotra ao amin'ny pejy miavaka.
Ny Starfish Crown-of-Thorns (COTS)
Ny volombavan'ireo kintana marefo (COTS) dia miverimberina, ka miteraka fisavoritahana (na 'loza') mazàna mamono ny haran-dranomasina any amin'ny faritra lehibe. Raha toa ka mety ho efa niavaka ara-tantara teo amin'ny vatohara sasany ny fipoahan'ny COTS, dia misy porofo matanjaka fa matetika izy ireo no mihatra matetika ary miteraka fahasimbana mafy kokoa tato ho ato. Ny fanimbana ireo mpihaza COTS (anisan'izany ny sifotra Triton, ny triggerfish titan) dia mety ho singa mitondra anjara, fa ny fanadihadiana vao haingana ref dia nanome porofo mampiaiky fa ny fiterahana fatra, mitarika amin'ny fiovan'ny famokarana plankton, no mpamily lehibe amin'ny fihenan'ny fihenanam-pitenenana. Manana ny fiantraikany manan-danja amin'ny mpitantana ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina izy ireo, ary manoro hevitra fa ny tetikasa maharitra indrindra ho an'ny fampihenana ny mety ho fisian'ny COTS dia mety hitranga mampihena ny loharanon-tsakafo voajanahary amin'ny alàlan'ny fitantanana ny fitifiran'ny rano.
Raha toa ny fitantanana fitahirizana rano no mety ho tetikasa maharitra indrindra, ny fiantraikan'ny tontolo iainana sy ny fiantraikan'ny COTS lehibe dia nanosika ireo mpitantana ny haran-dranomasina sy ny sehatry ny fizahan-tany hamboly mba hampivelatra sy hanara-maso ny fomba amam-panaon'ny COTS mandritra ny fipoahana. Ireto fomba manaraka ireto dia mahomby amin'ny famonoana, ny fanesorana na ny fisorohana ny fielezan'ny COTS, na dia hita amin'ny ankapobeny fotsiny aza izy ireo amin'ny fiarovana ny faritra kely (latsaky ny 4 hektara) amin'ny harambato:
Mpihinana kara-baton-koditra:Drupella cornus) miangona handevona ny atidoha atidoha (Platygyra sp.) amin'ny vatohara maloto. Sary © Dr J Dafni / Marine Photobank
tsindrona - Mampidira COTS ao anatin'ny andro vitsivitsy ny fiparitahan'ny salady na ny bisulfate siranaratra ary tsy misy poizina amin'ny fiainana an-dranomasina hafa. Ny fomba fitiliana tokana no ampiasaina amin'ny fampiasana salohim-bozaka dia fitaovana tena mahomby indrindra, ka ao anatin'ny segondra vitsy monja no hampidirana ny kintana tsirairay. Ny fikarakarana ny kintana 5-6 isaky ny minitra amin'ny fampiasana injections amin'ny solika voangona dia voarakitra raha oharina amin'ny kintana tokana isaky ny minitra miaraka amin'ny bisulfate natiora. ref
Famindrana fanodinana - Tapa-kofehy matevina, tongolobe mofomamy, na tsorakazo vy nohavaozina tsara indrindra mba hialana amin'ny kodiarana. Ny kintana voaangona dia azo alaina amin'ny toerana iray na sambo iray mitentina mifindrafindra toerana mba handefasana sambo kely. Noho izany dingana izany dia mitaky kintana mba hikarakarana imbetsaka, ny fanesorana ny tanana dia tena tsy mahomby ary misy fisalasalana avo lenta (izany hoe, arakaraky ny dipoavatra misy poizina avy amin'ny kintana) ho an'ny mpanararaotra sy ny olona tafiditra amin'ny famindrana ao sy ivelan'ny sambo.
Under Closure Underwater - Ny filalaovana ny fananganana an-dabozia tsy mitsaha-mitombo tsy mitsaha-mitombo hatrany ny fandehanana any amin'ny sehatry ny haran-dranomasina. Ny fehezan'ny fisamboaran-drano ambanin'ny tany ao amin'ny Haran-dranomasina Lehibe dia nilaza fa mety hisy drafitra sasantsasany azo atao, saingy tsy dia noraisina loatra izy ireo noho ny lojistik sy ny fiheverana mahomby. Ny fefy dia mety mahasoa amin'ny toerana tena bitika, tena sarobidy, saingy mety mila fanaraha-maso matetika sy fanaraha-maso.
Teknolojia vaovao - Fomba hafa amin'ny teknika hafa no jerena amin'ny fikarohana teknika fanaraha-maso mahomby kokoa. Tsy misy na dia efa ampy aza izao mba hizahana ny fizahan-tany, fa ny mpikaroka dia mandinika ny fepetra azo avy amin'ny fomba fikajiana, biochemika ary mikrobiolojika amin'ny fifehezana COTS.
Na dia kely aza ny haben'ny sifotra, dia mety hiteraka fahasimbana goavana amin'ny haran-dranomasina ny kisendrasendra manjopiaka rehefa miteraka haavo. Fanaraha-maso ny fihanaky ny sifotra, toa Drupella, dia nanaporofo fa sarotra, na dia teo ambonin'ny mizana kely aza, noho ny tantaram-piainany, ny fihetsika sy ny fifandraisana amin'ny tontolo iainana amin'ny vatohara.
Drupella dia maniry kokoa ny vatoharan-java-maniry misy rafitra telo-dimanjato, izay matetika no mitambatra manodidina ny toeram-pivarotana. Miafina ao anaty zanatany izy ireo ka sarotra ny mahazo azy. Ny sasany tamin'ireo mpizahatany mpizahatany tao amin'ny Harambato Lehibe Barrio dia nahomby tamin'ny fampiasana fitaovana lava sy fitaovana henjana henjana mba hanesorana ny takolaka tsirairay. Mety ho tena mandany fotoana be izany ary sarotra ny manamarina fa ny biby rehetra dia afindra amin'ny koloraly tsirairay. Ny zava-niainana hatramin'izao avy any Aostralia sy Floride dia manoro hevitra fa ny fanesorana sigara dia mety hahomby amin'ny fampihenana ny fatiantoka amin'ny vatam-paty na ny fahafatesan'ny kôlôniana goavana, saingy mety tsy hahomby toy ny fomba fitantanana ireo mponina mpihaza.
Ny fanandramana sy ny fanoherana ny fanoherana ny mpanolotra sivily
Ireo mpitantsoratry ny haran-dranomasina momba ny fisamboaran-draharaha mihevitra ny fisian'ny piramidan'ny haran-dranomasina dia mety hihevitra fa manana rafitra hanamarinana ny fihanaky ny fahavoazana, ary ny fanombanana ny habetsahana sy ny fanaparitahana ny kolikoly mba hitarihana ireo programa fanaraha-maso. Ny mpikarakara dia mety hihevitra ihany koa ny COTS sy Drupella ary Coralliophila fikarohana ref amin'ny fahazaran-dratsiny programa fanaraha-maso, ary ny fampandrosoana pifidianana ho an'ny mpihaza haran-dranomasina.
Ny valim-boka Urchin dia mahomby indrindra amin'ny firesahana ireo antony fototra, toy ny fanjonoana mihoa-pampana ny mpihaza na ny herbivore, na nutrient fandotoana. Amin'ny toe-javatra sasany, ny fihenam-bidy haingana amin'ny dity ny taolam-biby dia mety haniry hanamora ny fanarenana ny isan'ny vatohara ho toy ny ampahany tetik'ady fanarenana. Ny fitsaram-pitantanana amin'ny fitantanana, toy ny any Seychelles, dia nanamarika fa afaka mitombo avo roa heny ny fisorohana ny haran-kisoa any amin'ireo toerana izay nesorin'ny voninkazo. ref Any Kenya, ny fanandramana dia nanondro koa fa ny fanesorana ny urchin dia mety hitondra soa ho an'ny haran-dranomasina, fa ity dia azo alaina amin'ny fisondrotana amam-borona voalohany ary tsy maintsy miara-miasa koa amin'ny fiarovana ireo trondro mialokaloka amin'ny vatam-paty. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFITSIDI-DALÀNA maharitra ela eo amin'ny harambato lehibe
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFITSIPIKA FOTSINY FAHAMARINANA FAHAMARINANAmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTaridalana momba ny fifehezana kintana avy amin'ny tsilo GBRMPAmanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana Starfish misy satroboninahitra
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoGuam ny valin'ny valim-panontaniana momba ny valim-bava nataon'i Guammanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFandalinana ny tranga mikasika ny COTS fitantanana iombonana ao Filipinamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiambenana Reef: Diadema Outbreaks